Queen of KDrama OST Singer လို့တင်စားကြတဲ့ Punch ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး OST Songs (၇) ပုဒ် – MyStyle Myanmar
ကိုရီးယားအဆိုတော်မလေး Punch ကိုတော့ တော်တော်များများသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ သူမရဲ့ နာမည်ကိုမသိရင်တောင် သူမဆိုထားတဲ့ OST သီချင်းတွေကိုတော့ ရင်းနှီးကြမှာပါ။ သူမကို Queen of K Drama OST Singer လို့တောင် တင်စားကြပါတယ်။ အသံချိုချို အေးအေးလေးနဲ့ဆိုထားတဲ့ သူမရဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်ဝင်တေး OST တွေ အများကြီးထဲကမှ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ OST သီချင်း (၇) ပုဒ်ကို ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သီချင်းအေးအေးလေးတွေ နားထောင်ရတာကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒီ (၇) ပုဒ်လုံးကို ကြိုက်မှာသေချာပါတယ်။
လူကြိုက်အများဆုံး OST Song တွေထဲမှာတော့ Stay With Me က ထိပ်ဆုံးကပါပါတယ်။ Goblin ဇာတ်ကားရဲ့ အဓိက ဇာတ်ဝင်တေးဖြစ်ပြီး Punch နဲ့အတူ Chanyeol (Exo) တို့က ပါဝင်သီဆိုပေးထားပါတယ်။
Descendants of the Sun ဇာတ်ကားရဲ့ OST Song ဖြစ်တဲ့ Everytime သီချင်းကိုတော့ Punch နဲ့ Chen (Exo) တို့က သီဆိုပေးထားတာပါ။ ဒီသီချင်းလေးက အရမ်းကို လူကြိုက်များပါတယ်။
နောက်ထပ်လူကြိုက်အများဆုံး OST Song ကတော့ Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo ဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Say Yes ပါ။ ဒီ OST Song ကိုတော့ Punch နဲ့အတူ Loco က သီဆိုထားပါတယ်။
Hotel Del Luna ဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Another Day ကိုလည်း Punch နဲ့ Monday Kiz တို့က သီဆိုပေးထားတာပါ။ ဒီ OST Song လေးကလည်း လူကြိုက်အရမ်းများပါတယ်။
Hotel Del Luna ဇာတ်ကားရဲ့ နောက်ထပ် ဇာတ်ဝင်တေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Done For Me ကလည်း Punch သီဆိုထားတာပါ။ ဒီသီချင်းလေးကလည်း Hotel Del Luna ပရိသတ်တွေရဲ့ အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
Hotel Del Luna ဇာတ်ကားရဲ့ နောက်ထပ်ဇာတ်ဝင်တေးဖြစ်တဲ့ Love del Luna ဆိုတဲ့ OST Song ကိုလည်း Punch နဲ့အတူ Taeyong (NCT) တို့က သီဆိုးပေးထားပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကလည်း Hotel Del Luna ပရိသတ်တွေရဲ့ အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
Dr. Romantic2ရဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Go Away Go Away သီချင်းလေးကိုတော့ Punch နဲ့အတူ Chanyeol (Exo) က သီဆိုပေးထားပါတယ်။ ဒီ OST Song လေးကတော့ ၂၀ ရက်နေ့ကမှ ထွက်ထားတာဖြစ်ပြီး အရမ်းကို လူကြိုက်များနေပါတယ်။
ကိုရီးယားအဆိုတျောမလေး Punch ကိုတော့ တျောတျောမြားမြားသိကွမယျ ထငျပါတယျ။ သူမရဲ့ နာမညျကိုမသိရငျတောငျ သူမဆိုထားတဲ့ OST သီခငျြးတှကေိုတော့ ရငျးနှီးကွမှာပါ။ သူမကို Queen of K Drama OST Singer လို့တောငျ တငျစားကွပါတယျ။ အသံခြိုခြို အေးအေးလေးနဲ့ဆိုထားတဲ့ သူမရဲ့ ကိုရီးယားဇာတျဝငျတေး OST တှေ အမြားကွီးထဲကမှ လူကွိုကျအမြားဆုံးဖွဈတဲ့ OST သီခငျြး (၇) ပုဒျကို ပရိသတျတှအေတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ သီခငျြးအေးအေးလေးတှေ နားထောငျရတာကွိုကျတဲ့သူဆိုရငျတော့ ဒီ (၇) ပုဒျလုံးကို ကွိုကျမှာသခြောပါတယျ။
လူကွိုကျအမြားဆုံး OST Song တှထေဲမှာတော့ Stay With Me က ထိပျဆုံးကပါပါတယျ။ Goblin ဇာတျကားရဲ့ အဓိက ဇာတျဝငျတေးဖွဈပွီး Punch နဲ့အတူ Chanyeol (Exo) တို့က ပါဝငျသီဆိုပေးထားပါတယျ။
Descendants of the Sun ဇာတျကားရဲ့ OST Song ဖွဈတဲ့ Everytime သီခငျြးကိုတော့ Punch နဲ့ Chen (Exo) တို့က သီဆိုပေးထားတာပါ။ ဒီသီခငျြးလေးက အရမျးကို လူကွိုကျမြားပါတယျ။
နောကျထပျလူကွိုကျအမြားဆုံး OST Song ကတော့ Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo ဇာတျကားရဲ့ ဇာတျဝငျတေးတဈခုဖွဈတဲ့ Say Yes ပါ။ ဒီ OST Song ကိုတော့ Punch နဲ့အတူ Loco က သီဆိုထားပါတယျ။
Hotel Del Luna ဇာတျကားရဲ့ ဇာတျဝငျတေးတဈခုဖွဈတဲ့ Another Day ကိုလညျး Punch နဲ့ Monday Kiz တို့က သီဆိုပေးထားတာပါ။ ဒီ OST Song လေးကလညျး လူကွိုကျအရမျးမြားပါတယျ။
Hotel Del Luna ဇာတျကားရဲ့ နောကျထပျ ဇာတျဝငျတေးတဈခုဖွဈတဲ့ Done For Me ကလညျး Punch သီဆိုထားတာပါ။ ဒီသီခငျြးလေးကလညျး Hotel Del Luna ပရိသတျတှရေဲ့ အကွိုကျဆုံး သီခငျြးတဈပုဒျပါပဲ။
Hotel Del Luna ဇာတျကားရဲ့ နောကျထပျဇာတျဝငျတေးဖွဈတဲ့ Love del Luna ဆိုတဲ့ OST Song ကိုလညျး Punch နဲ့အတူ Taeyong (NCT) တို့က သီဆိုးပေးထားပါတယျ။ ဒီသီခငျြးလေးကလညျး Hotel Del Luna ပရိသတျတှရေဲ့ အကွိုကျဆုံး သီခငျြးတဈပုဒျပါပဲ။
Dr. Romantic2ရဲ့ ဇာတျဝငျတေးတဈပုဒျဖွဈတဲ့ Go Away Go Away သီခငျြးလေးကိုတော့ Punch နဲ့အတူ Chanyeol (Exo) က သီဆိုပေးထားပါတယျ။ ဒီ OST Song လေးကတော့ ၂၀ ရကျနကေ့မှ ထှကျထားတာဖွဈပွီး အရမျးကို လူကွိုကျမြားနပေါတယျ။
MyStyle Myanmar2020-01-23T20:29:58+06:30January 22nd, 2020|Entertainment, တေးဂီတ – Music|